Ra'iisul wasaaraha cusub ee Sweden ayaa is casilay 7 saac kadib markii ay dhacday dowladdii dhexe - Jowhar somali news leader
Ra’iisul wasaaraha cusub ee Sweden ayaa is casilay 7 saac kadib markii ay dhacday dowladdii dhexe
Go’aankeeda ah in ay xilka ka degto ayaa daba socday dhacdooyin is daba joog ah oo keenay in miisaaniyadeeda ay ku guuldareysato in ay soo marto baarlamaanka ka hor inta uusan xisbiga da’da yar ee Miljöpartiet ku dhawaaqin in uu ka baxayo xukuumadda wadaagga ah.
“Waxaa jirta dhaqan dastuuri ah oo ah in dowlad wadaag ah ay iscasisho marka hal xisbi uu ka tago,” Andersson, oo ah xisbiga Sooshal dimuqraadiga, ayaa u sheegay suxufiyiinta.
“Ma doonayo inaan hogaamiyo dowlad sharcinimadeeda su’aalo la iska weydiin doono.”
Magdalena Andersson waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in mar kale loo doorto jagadan dhawaan iyada oo ah madaxa dawlada laga tirada badan yahay oo ka kooban xisbiga Socialdemokraterna oo kaliya.
Qalalaasaha arbacadii ayaa bilaabmay markii xisbiga Center-ku uu la noqday taageeradii uu u hayay miisaaniyada Andersson, sababo la xidhiidha tanaasulaadkii loo sameeyay Bidixda. Taasi waxay ka dhigan tahay in miisaaniyadda Ra’iisul wasaaraha cusub aysan haysan codad ku filan oo uu ku meel mariyo baarlamaanka.
Sharci-dajiyayaasha ayaa taa beddelkeeda ansixiyay miisaaniyad kale oo ay soo bandhigeen mucaaradka Moderaterna, Christian Democrats iyo Sverigedemokraterna midig-fog.
Miisaaniyada mucaaradka ee garabka midig – oo ay si wadajir ah uga wadahadleen xisbiyada Konserfatifka iyo Christian Democrats – ayaa ku guuleystey 154 cod halka 143 cod ay heleen.
Dhaawaca dilaaga ah ayaa yimid markii hogaamiyaha xisbiga Greens Per Bolund uu sheegay in xisbigiisu uusan u dulqaadan karin mucaaradka “miisaaniyadda taariikhiga ah, oo loo diyaariyey markii ugu horeysay ee midigta fog”, oo uu ka tago dowladda.
Greens ayaa ku gacan saydhay miisaaniyada la ansixiyay, iyaga oo ku tilmaamay “kala duwanaanshaha dadka, goynta miisaaniyada deegaanka, iyo kordhinta qiiqa”, iyaga oo tixraacaya miisaaniyada cusub ee la dhimay batroolka iyo canshuurta naaftada – dhimista 50 öre litirkii laga bilaabo May 1st 2022.
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay deegaan ka tirsan…
Kulan loogaga hadlayay Gurmadka Abaaraha oo lagu qabtay…
Bolund waxa uu shir jaraa’id ku sheegay in aysan ahayn hadafka xisbiga Miljöpartiet in uu fuliyo miisaaniyad uu ka gorgortamayo xisbiga Sverigedemokraterna, iyo in aysan ku dhex fadhiisan karin dowlad miisaaniyad ay Sweden ka gorgortami karto.
Andersson ayaa loo qorsheeyay in ay si rasmi ah u qabato shaqadeeda jimcaha ka dib markii ay kulan la qaadatay Boqorka Carl XVI Gustaf, ka dib markii uu baarlamaanka ku ansixiyay cod gaar ah subaxnimadii Arbacada.
Af hayeenka baarlamaanka Andreas Norlen ayaa sheegay in uu aqbalay iscasilaada Andersson uuna la xiriiri doono madaxda xisbiga ka hor inta uusan go’aansanin Khamiista sida uu u socdo.
Tallaabooyinka saxda ah ee waxa dhici doona gabi ahaanba ma cadda.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa sheegay in ay Magdalena Andersson ku taageeri doonaan ra’iisul wasaare kale haddii ay taasi dhacdo. Tani waxay la macno noqon kartaa in Andersson uu ugu dambeyntii noqon doono ra’iisul wasaare si kastaba ha ahaatee, haddii midkoodna xisbigu uusan bedelin mowqifkooda ku aaddan taageerada dalabkeeda.
Xeerarka codeynta miisaaniyada iyo codka ra’iisul wasaaraha ayaa wax yar ku kala duwan Sweden. Codeynta miisaaniyada, soo jeedinta ugu badan ee haa ayaa ku guulaysata. Codeynta ra’iisul wasaaraha, murashaxa ayaa ku guuleysanaya mar haddii aqlabiyadda aysan u codeynin iyaga.
Tani waxay la macno tahay in Andersson aanu uga baahnayn wax ka badan xisbiga Center-ka marka loo eego diidmadii uu ku diiday ra’iisal wasaaraha labaad – tani waxay ku filnaan doontaa inay ka dhigto ra’iisul wasaare, waase haddii xisbiga Vänsterpartiet iyo Miljöpartiet ay sidoo kale ka aamusaan ama u codeeyaan iyada. doono.
Maanta ayaa waxaa ku beegan 100 saano markii aay dhumarka dhulweynaha Sweden heleen in aay codeeyaan codkooda dhiibtan Laakin maanta waxa la doortay
Ra’iisul wasaaraha Magdalena Andersson oo noqotay Haweneydi ugu horeysay oo noqoto Ra’iisul wasaaraha dalka Sweden kana tirsaan xisbiga Sooshal dimuqraadiga.
Agabkii Ay Bililiqeysteen Ciidamada Ingriiska oo 153 Sano Kadib Dib Loogu Soo Celiyay Itoobiya.
Guddiga Doorashooyinka oo sheegay inay soo gaareen cabashooyin ayna baaritaan ku sameynayaan
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo saaka soo gaaray…
NISA oo sheegatay inay howlgal qorsheysan ku dishay 12 dagaalame oo ka tirsan…
Tel Aviv surpasses Paris and Singapore to become the most expensive…